Hondo Royale 'Apex Legends Mobile' yeIOS ichatanga munyika gumi svondo rinouya | Nhau dze iPhone
Mutambo weApex Legends Mobile uchatangwa svondo rinouya mune dzimwe nyika gumi. Aya angava mashoko akanaka, nokuti kuwedzera kwemutambo uyu pane mamwe iOS neAroid device inogara iri nhau dzakanaka kune vashandisi. Nhau dzakaipa mune iyi nyaya ndeyekuti nyika yedu, Spain, inogara kunze kwenguva yekuburitswa uku.
Zvinoenderana newebhusaiti yeRespawn, vashandisi ve: Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Mexico, Peru, Argentina neColombia ichakwanisa kurodha Apex Legends Nharembozha yeIOS imwe nguva svondo rinouya, isu tose tichafanira kumirira zvishoma.
Apex, yekutanga kuburitswa inotarisirwa nevazhinji vashandisi
Uyu pasina mubvunzo mutambo unozivikanwa zvikuru nevashandisi uye Apex Legends Hondo iHondo Royale yanga yakamirira kusvika pakusvika kwepamutemo. ichave svondo rinouya kune iOS zvishandiso. Uyu anogona kuve mukwikwidzi mukuru kune yakakurumbira Fortnite uye PUBG, kunyangwe iyi yekare (Fortnite) isisipo muApple app chitoro sezvatinoziva tese.
Parizvino, kuburitswa uku kuchasvika mumatanho uye isu tinofanira kurangarira kuti iyi yekutanga haipe zvizere zveBattle Royal. Zvinoita sekuti nyika dzekutanga kuve nemutambo unowanikwa dzichakwanisa kunakidzwa chete Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder uye Caustic. Painotangwa pachiyero chepasi rose, mamwe masisitimu uye zvishongedzo zviripo mumutambo zvichawedzerwa, asi parizvino zvichave zvishoma, kunyangwe sarudzo yeCross Play pakati peiyo console nePC shanduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Hondo Royale 'Apex Legends Mobile' yeIOS ichatanga munyika gumi svondo rinouya
Apple's AR Magirazi Pinda Dhizaini Yekusimbisa Stage